Xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsamer oo dalab u diray Farmaajo | dayniiile.com
Home WARKII Xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsamer oo dalab u diray Farmaajo
Xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ka hadlay munaasabadii maanta iyo khudbadii uu ka jeediyey Madaxweyne Farmaajo ayaa ku dhaliilay in dhowr qodob oo muhiim ah oo Madaxweynuhu uu iska indha tiray maanta.
Sidoo kale Cabdiraxmaan ayaa dalab la xariira doorashada Gedo u diray Madaxweyne Farmaajo, wuxuun xusay dhowr qodob oo maanta la gudbooneed in Farmaajo uu khudbadiisa ku soo daro, kuwaas oo ay ka mid yihiin abaaraha dalka ka jira, doorashooyinka dalka ka socda, gaar ahaan dhaarinta xildhibaanada iyo doorashada kuraasta Garbahaarey.
Xildhibaan Cabdiraxmaan oo marka hore u hambaliyeeyey ciidanka xoogga Soomaaliya ayaa kula dardaarmay inay ka fogaadaan in loo adeegsado dano guracan, wuxuu kula taliyey inay xirfadahooda kor u qaadaan, isagoo dhaliilay hanaankii saraakiisha loo dalacsiinaayey waayihii dambe.
Wuxuu sheegay in maanta uu Farmaajo khudbadiisii ku soo koobay faan iyo qab aan jirin, isagoo ku ehbiyey inuu ka hor wareego doorashada kuraasta gobolka Gedo, si dadkiisu aysan u weyn metelaad ay doorashada uga qeyb galaan.
“Farmaajo hadii uu ilaahey yaqaano waa bil Ramadaan, hadii uu qabyaalad ka fogyahay, ha iska daayo muranka doorashada Gedo, dadkiisa iyo deegaanka uu ka soo jeedo doorashada inay ka qeyb galaan ha ogolaado. Guddiyada doorashada iyo maamulka Jubbaland Garbahaarey ha tagaane ka wareeg,” ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur.
Wuxuu intaas ku sii daray, “Walaalow hadaa Soomaali qabyaalad ka waanineysid adigu iska bilaaw oo ogolaaw doorashada Gedo, si aysan uga harin doorashooyinka baarlamaanka, Farmaajo adigey taasi kaa falantaa ee u tanaasul umadda Soomaaliyeed.”
Sidoo kale siyaasigaan ayaa Farmaajo ku dhiliilay in maanta uusan soo hadal qaadin abaarta baahsan ee dalka ka jirta, xilli Soomaaliya ay qarka u saaran tahay inay ka dilaacdo macaluul daran.
Dhanka ammaanka ayuu sidoo kale sheegay in maanta oo ciidankii qaranka uu ka hor hadlaayey uusan Farmaajo soo hadalqaadin, xilli Al-Shabaab ay ka dagaalamayaan gudaha Muqdisho, sidoo kale ay gumaadayaan masuuliyiinta iyo haldoorka bulshada Soomaaliyeed.
Previous articleQorshaha cusub ee dagaal ee uu Ruushka isku diyaarinayo ee Yurub
Next articleWax ma u qabtay Farmaajo Dalka Soomaliya mise dib uu u celshay
Hay’adda Duulista Rayidka oo war kasoo saartay Shaqo joojinta Shirkaddaha duulimaadyada
Maxkamadda dastuuriga ah ee Uganda oo weeydiisay wiilka madaxweynaha dalkaasi Jeneraal...